Ibali Lobomi: Ndizamile Ukulandela Imizekelo Emihle | UThomas McLain
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla yaseOstreliya Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Ndizamile Ukulandela Imizekelo Emihle
Kubalisa uThomas Mclain
Ndabuza: “Uyazi phofu ukuba ndimdala?” UIzak Marais, owandifowunela ndiseColorado yena esePatterson, eNew York waphendula: “Ndiyazi kakuhle loo nto.” Makhe ndinibalisele ukuba yayiqale phi le ncoko.
NDAZALELWA eWichita, eKansas, eMerika, ngoDisemba 10, 1936, ibe ndingowokuqala kubantwana abane. Abazali bam, uWilliam noJean, babengabanquli bakaYehova abazinikeleyo. Utata wayesisicaka sebandla, igama awayebizwa ngalo umntu okhokelayo ebandleni. Umama wafundelwa ngumakhulu, uEmma Wagner. Umakhulu wafundela abantu abaninzi, kuquka noGertrude Steele, owayengumthunywa wevangeli ePuerto Rico kangangeminyaka. * Lilonke baninzi abantu ababe ngumzekelo omhle kum.
ABANTU ABABA YIMIZEKELO EMIHLE KUM
Ngutata lo umi kwikona yesitrato, ehambisa iimagazini kubantu abadlulayo
Ndikhumbula ngenye ingokuhlwa yangoMgqibelo, xa ndandineminyaka emihlanu ubudala, ndikunye notata, sihambisa iMboniselo neConsolation (ngoku ebizwa ngokuba nguVukani!) kubantu abadlula ngesitrato. Ngelo xesha, ilizwe lalisilwa kwiMfazwe Yehlabathi II. Ugqirha othile owayenxile eludaka weza waza wathuka uTata ngenxa yokuba engathathi cala emfazweni, esithi uligwala kwaye ubaleka ukuya emkhosini. Lo gqirha wasondela ebusweni bukaTata waza wathi, “Kutheni ungandibethi nje foko-fokondini legwala!” Ndandisoyika kodwa kwangaxeshanye ndizidla ngoTata. Waqhubeka nje yena ehambisa iimagazini kubantu ababeze kubukela. Kusenjalo kwathi gqi ijoni, waza lo gqirha walikhwaza esithi, “Uza kuliyeka nje eli gwala?” Elo joni labona ukuba unxilile, lathi kuye, “Khawugoduke uyolala mfondini!” Bemka bobabini. Ndiye ndimbulele uYehova xa ndicinga ngesibindi awasinika utata. Wayeneendawo zokucheba ezimbini eWichita, ibe nalo gqirha wayecheba phaya!
Apha ndikunye nabazali bam, sisiya endibanweni eWichita ngeminyaka yoo-1940
Xa ndandineminyaka esibhozo, abazali bam bathengisa indlu neevenkile zabo, bazakhela indlwana okwaziyo ukuyichitha uphinde uyakhe, baza bafudukela eColorado apho kwakufuneka abavakalisi abangakumbi. Sahlala kufutshane neGrand Junction, apho abazali bam baba ngoovulindlela baza babamba izingxungxo kwiifama zalapho. Ngenxa yokusikelelwa nguYehova nokukhuthala entsimini, kwasekwa ibandla. NgoJuni 20, 1948, uTata wandibhaptiza kumfula osentabeni kunye nabanye ababeyamkele inyaniso, abaquka uBillie Nichols nenkosikazi yakhe. Kamva abakwaNichols baqalisa umsebenzi wesiphaluka, nonyana wabo kunye nenkosikazi yakhe nabo balandela.
Sasityelelana kwaye sisakhana nabantu abaninzi ababexakeke ngumsebenzi woBukumkani, ngokukodwa abakwaSteele—uDon noEarlene, uDave noJulia, kunye noSi noMartha—ababa nefuthe kakhulu kubomi bam. Bandibonisa indlela obuba nenjongo nobuba mnandi ngayo ubomi bomntu xa ebeka uBukumkani kwindawo yokuqala.
Xa ndandineminyaka eyi-19, uBud Hasty, owayethanda ukuya ekhaya, wandicela ukuba siye kuba ngoovulindlela kumazantsi eUnited States. Umveleli wesiphaluka wasicela ukuba sifudukele eRuston, eLouisiana, apho amaNgqina amaninzi ayepholile. Kwathiwa masiziqhube veki nganye iintlanganiso, kungakhathaliseki ukuba bangaphi abantu abezayo. Safumana indawo efanelekileyo yokuqhuba iintlanganiso saza sayilungisa. Saziqhuba zonke iintlanganiso, kodwa ke kwadlula ixesha isithi sobabini kuphela abezayo. Sasitshintshana ngeentetho, omnye anikele aze omnye aphendule yonke imibuzo. Xa intetho inomboniso, sasiwenza sobabini eqongeni nakubeni kungekho mntu usiphulaphuleyo! Ekugqibeleni, udade owayesele ekhulile waqalisa ukuza kwiintlanganiso. Ethubeni nabanye abantu ababefundelwa, nababepholile baqalisa ukuza, ibe kungekudala saba nebandla elivuthayo.
Ngeny’ imini, sinoBud sadibana nomfundisi weChurch of Christ, owathetha ngezibhalo endandingaziqhelanga. Loo nto yandothusa, yandenza ndacinga kakhulu ngezinto endizikholelwayo. Iveki yonke ndandilala ebusuku ndiphanda iimpendulo zemibuzo awayibuzayo. Olo phando lwandinceda ndaqiniseka ngezinto endandizikholelwa. Yayingathi andisadibani nomnye umfundisi kwakhona.
Kungekudala emva koko, umveleli wesiphaluka wandicela ukuba ndifudukele e-El Dorado, eArkansas, ndiye kuncedisa kwelo bandla. Kwaye kwafuneka ndiman’ ukubuyela eColorado ukuze ndiye kuvela phambi kwebhodi yomkhosi. Ngeny’ imini, ndisenza loo mahlandinyuka, indim nabanye oovulindlela sihamba ngemoto yam, sehlelwa yingozi eTexas, imoto yaphela. Sabiza omnye umzalwana weza kusilanda wasisa kwikhaya lakhe, emva koko waya nathi kwiintlanganiso zebandla. Ebandleni kwenziwa isaziso sokuba sasehlelwe yingozi, kwaye abazalwana basincedisa ngemali. Laa mzalwana sasifikele kwakhe wathengisa imoto yam nge-$25.
Safumana into eyasisa eWichita, apho omnye umzalwana owayedla ngokuya ekhaya, uE. F. “Doc” McCartney, wayenguvulindlela. Oonyana bakhe abangamawele, uFrank noFrancis, babengabona bahlobo bam, ibe basengabo nangoku. Babenemoto endala, ibe bandithengisela yona nge-$25, kanye laa mali ndandiyifumene xa ndandithengisa imoto yam eyayonakele. Ndandiqala ukubona ukuba uYehova wayendinika izinto endandizidinga ukuze ndibeke umsebenzi woBukumkani kwindawo yokuqala. Xa ndandilapho, abakwaMcCartney bandazisa kwintwazana ethandekayo eyayizinikele kuYehova, uBethel Crane. Unina, uRuth, iNgqina elikhutheleyo laseWellington, eKansas, waqhubeka enguvulindlela de wadlula kwiminyaka eyi-90 ubudala. Satshata noBethel kwisithuba esingaphantsi konyaka sidibene, ngo-1958, ibe saba ngoovulindlela kunye e-El Dorado.
Emva kokucinga ngemizekelo emihle yabantu esasikhule nabo, sagqiba kwelokuba silungele ukwenza nantoni na intlangano kaYehova ethi masiyenze. Safumana isabelo sokuba ngoovulindlela abakhethekileyo eWalnut Ridge, eArkansas. Ngo-1962, savuya sakumenywa ukuba siye kwiklasi ye-37 yaseGiliyadi. Savuya kakhulu sakufumanisa ukuba noDon Steele wayekuloo klasi. Ukugqiba kwethu, sathunyelwa eNairobi, eKenya. Kwakubuhlungu xa sasishiya iNew York, kodwa loo ntlungu yajika yaluvuyo sakudibana nabazalwana bethu kwisikhululo seenqwelo-moya saseNairobi!
Apha sasisentsimini eNairobi sikunye noMary noChris Kanaiya
Sakhawuleza sayithanda iKenya kunye nesabelo esasisinikiwe. Abantu bokuqala esabafundelayo baza benza inkqubela nguChris noMary Kanaiya. Nangoku basekwinkonzo yexesha elizeleyo eKenya. Ngonyaka olandelayo, sacelwa ukuba siye eKampala, eUganda, saba ngabathunywa bevangeli bokuqala kwelo lizwe. Kwakumnandi kakhulu kuba babebaninzi abantu ababenqwenela ukufunda iBhayibhile, ibe baba ngamaNgqina. Emva kweminyaka emithathu enesiqingatha siseAfrika, kwafuneka sihambe siyokukhulisa umntwana. Sabuyela eMerika. Ngemini esemka ngayo eAfrika, indlela esasibuhlungu ngayo yayingaphezu kwaleyo yaxa sasisimka eNew York. Sasibathanda abantu baseAfrika ibe sasinethemba lokuba siza kubuya ngenye imini.
SAFUMANA ISABELO ESITSHA
Safika sahlala kwithambeka elikwintshona yeColorado, apho abazali bam babehlala khona. Kungekudala emva koko, intombi yethu yokuqala, uKimberly yazalwa, ibe kwiinyanga eziyi-17 kamva, salekelisa ngoStephany. Asizange sisithathe lula isabelo sethu sokuba ngabazali, ibe sazimisela ukuba sizifundise inyaniso iintombi zethu ezintle. Sasifuna zifunde kuthi kuba nathi sasifunde kwabanye. Kwasivul’ ingqondo ukwazi ukuba, ngoxa umzekelo omhle unceda ekuqeqesheni abantwana, awuthethi kuthi baza kukhonza uYehova xa bekhulile. Umninawa wam kunye nomnye udadewethu bayishiya inyaniso. Sinethemba lokuba baza kuphinda bayixelise imizekelo emihle abaye bayimiselwa ngabanye abantu.
Sakuvuyela kakhulu ukukhulisa abantwana bethu ibe sasisoloko sisenza izinto njengentsapho. Ekubeni sasihlala kufutshane neAspen, eColorado, safunda umdlalo wokutyibiliza ekhephini ukuze siwudlale kunye. Loo maxesha olonwabo asinika ixesha lokuncokola neentombi zethu. Sasikhe sihambe siye kumisa iintente emagqagaleni size sincokole kamnandi sothe umlilo. Nangona zazisencinci, zazidla ngokubuza imibuzo efana nothi “Ndiza kwenza ntoni xa ndimdala?” nothi “Ndifuna ukutshata nomntu onjani?” Sazama ukubethelela imigaqo yeBhayibhile kwiintliziyo nakwiingqondo zeentombi zethu. Sazikhuthaza ukuba zingene kwinkonzo yexesha elizeleyo xa zindala saza sazibonisa ukuba kububulumko ukutshata nomntu onenjongo efanayo. Sazama ukuzibonisa ukuba kuyanceda ukungatshati umncinci kakhulu. Sasinamazwi esidla ngokuwathetha athi, “Ungatshati de ube neminyaka eyi-23.”
Njengabazali bethu, sasizama ngandlela zonke ukuba intsapho ingaphoswa ziintlanganiso nayintsimi. Sasimema abanye abantu abakwinkonzo yexesha elizeleyo ukuba beze kuhlala kwikhaya lethu. Sasiye sibe nemincili xa sibalisa ngomsebenzi wokuba ngabathunywa bevangeli. Sasisithi sinethemba lokuba ngeny’ imini, sobane siya kuhamba kunye siye eAfrika. Iintombi zethu zaziyinqwenela kakhulu loo nto.
Isifundo sentsapho sasisiqhuba rhoqo, ibe sasidla ngokulinganisa iimeko ezinokuvela esikolweni. Iintombi zethu zazidlala indima yeNgqina eliphendula imibuzo. Zazikuthanda ukufunda ngale ndlela, ibe loo nto yazenza zazithemba. Njengoko zazikhula, zakhalaza ngesifundo sentsapho. Ngeny’ imini, ndinomsindo, ndathi mazibuyele kumagumbi azo, asiyi kuba naso isifundo. Zothuka zaza zaqalisa ukulila zisithi zifuna siqhutywe isifundo. Sabona apho ukuba ngokwenene sasizinceda ukuba zimthande ngeentliziyo zazo uYehova. Zaya zisithanda isifundo, ibe sasizivumela ukuba zithethe ngokukhululekileyo. Ngamany’ amaxesha kwakusiba nzima xa zisixelela ukuba azivumelani nemfundiso ethile. Kodwa ke, sayiqonda into eyayisezintliziyweni zazo. Emva kokuba sithethile nazo, zaziye zaneliseke yindlela uYehova azijonga ngayo izinto.
UKULUNGELA OLUNYE UTSHINTSHO
Iintombi zethu zakhula ngokukhawuleza kunokuba sasilindele. Intlangano kaThixo yasinceda yaza yasalathisa eyona ndlela iyiyo yokuzikhulisa ukuze zithande uYehova. Savuya xa zombini zaqalisa ubuvulindlela ukugqiba kwazo kwisikolo samabanga aphezulu, ibe zafunda iindlela zokuziphilisa. Zafudukela eCleveland, eTennessee, nabanye oodade ababini ziye kukhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi. Sasizikhumbula kakhulu, kodwa saxoliswa kukuba zazisebenzisa ubomi bazo kwinkonzo yexesha elizeleyo. Nathi saphinda sabuqala apho besibuyeke khona ubuvulindlela, ibe loo nto yasenza safumana amanye amalungelo avuyisayo. Sasiman’ ukubambela umveleli wesiphaluka, sincedisa nasezindibanweni.
Ngaphambi kokuba zifudukele eTennessee, iintombi zethu zatyelela eLondon, eNgilani, ziye kubona iofisi yesebe. UStephany, owayeneminyaka eyi-19 ngelo xesha, wadibana noPaul Norton, umfana owayekhonza eBheteli. Xa baphindayo, uKimberly wadibana nomnye umfana owayesebenza noPaul, uBrian Llewellyn. UPaul noStephany batshata, kodwa ke emva kokuba eye waneminyaka eyi-23 ubudala. UBrian noKimberly bona batshata kunyaka olandelayo, eneminyaka eyi-25 ubudala. Ngoko abazange batshate de ubuncinane bafika kwiminyaka eyi-23. Nathi sabathanda kakhulu abakhwenyana bethu.
Apha sasikunye noPaul, uStephany, uKimberly noBrian kwisebe laseMalawi ngo-2002
Iintombi zethu ziye zasixelela ukuba zincedwe ngumzekelo wethu nowabazali bethu, ukuze zithobele umyalelo kaYesu othi ‘sifune kuqala ubukumkani,’ kwanaxa zineengxaki zemali. (Mat. 6:33) NgoAprili 1998, uPaul noStephany bamenyelwa kwiklasi ye-105 yaseGiliyadi, ibe emva koko bathunyelwa eMalawi, eAfrika. Kwangelo xesha, uBrian noKimberly bacelwa ukuba baye kusebenza kwiBheteli yaseLondon kwaye kamva bathunyelwa kwiBheteli yaseMalawi. Savuya kakhulu, kuba kaloku ayikho indlela ebhetele ulutsha olunokubusebenzisa ngayo ubomi balo.
ESINYE ISABELO ESIBANGEL’ IMINCILI
NgoJanuwari 2001, ndafowunelwa ngulaa mzalwana, njengoko besenditshilo ekuqaleni. UMzalwan’ uMarais, umveleli weSebe Lenkonzo Yokuguqulela, wandichazela ukuba abazalwana babelungiselela uqeqesho lokufundisa abaguquleli isiNgesi ehlabathini jikelele, ibe nangona ndandineminyaka eyi-64 ubudala, babefuna ndiqeqeshwe ukuze nam ndiyokufundisa abaguquleli. SinoBethel sayithandazela le nto saza sathetha noomama bethu ababesele bekhulile, sicela amacebiso. Bobabini basikhulula, nangona sasingayi kukwazi ukubanceda. Ndaphinda ndafowunela eBheteli ndabaxelela ukuba singalivuyela kakhulu eli lungelo lingaka.
Emva koko kwafunyaniswa ukuba umama unesifo somhlaza. Ndamxelela ukuba asisahambi, siza kuncedisana nodadewethu uLinda ekumongeni. UMama wathi: “Ayizukwenzeka loo nto. Iya kundigulisa nangakumbi kaloku.” NoLinda wamngqinela. Sikuxabisa kakhulu ukuzincama kwabo noncedo lwabazalwana basekuhlaleni! Emva kosuku sifikile kwiZiko Lemfundo LeWatchtower elisePatterson, uLinda wasifowunela esixelela ukuba uMama uswelekile. Kodwa ke saziphosa nofele kumsebenzi wethu omtsha, sisazi ukuba wayeya kusikhuthaza ukuba senze loo nto ukuba wayesaphila.
Imilomo yethu yayingahlangani luvuyo xa safumanisa ukuba isabelo sethu sokuqala sasikwisebe laseMalawi, apho iintombi nabakhwenyana bethu babekhonza khona. Sasiphinde sakunye kwakhona! Ukusuka apho, saya kufundisa eZimbabwe, saza sadlulela eZambia. Emva kweminyaka emithathu enesiqingatha sisenza lo msebenzi, sacelwa ukuba sibuyele eMalawi ukuze sibhale amava amaNgqina awayeye anyamezela intshutshiso ngenxa yokungathathi-cala kwipolitiki. *
Apha sasisentsimini nabazukulwana bethu
Ngo-2005, saphinda sabuhlungu kwakhona xa sagoduka saya eBasalt, eColorado, apho sisaqhubeka nangoku singoovulindlela noBethel. Ngo-2006, uBrian noKimberly bafudukela kwindlu esecaleni kwale sihlala kuyo ukuze bakhulise iintombi zabo ezimbini, uMackenzie noElizabeth. UPaul noStephany bona baseseMalawi, ibe uPaul ukhonza kwiKomiti Yesebe. Ngoku ekubeni ndisondele kwiminyaka eyi-80 ubudala, ndivuya gqitha xa ndibona amadoda endikhe ndasebenza nawo amancinci apha kum, ethwele iimbopheleleko endandikhe ndazithwala. Into esivuyisayo, ubukhulu becala, yimizekelo emihle esiye safunda kuyo ukuze kuncedakale abantwana nabazukulwana bethu.
^ isiqe. 5 Jonga iMboniselo kaMeyi 1, 1956, iphepha 269-272, nekaMatshi 15, 1971, iphe. 186-190, zesiNgesi, ukuze ufunde ngakumbi ngomsebenzi wokushumayela wabakwaSteele.
^ isiqe. 30 Ngokomzekelo, funda amava kaTrophim Nsomba akwiMboniselo ka-Aprili 15, 2015, iphepha 14-18.